4 tixraacyada xisaabaadka Instagram | Abuurista khadka tooska ah
Beatrice Hernani | | Khayraadka
Marka aan bilaabo mashruuc waxaan qaabeeyaa shaqadayda dhowr waji. Waxaan jecelahay inaan sidan u shaqeeyo maxaa yeelay waxay iga caawineysaa inaan is abaabulo oo aan qorsheeyo waqtigeyga.
Ka mid ah tallaabooyinka ugu horreeya ee lagu horumarinayo habka hal-abuurka, waxaan iftiiminayaa raadinta tixraac. Waa inaan marwalba maskaxda ku haynaa in raadinta tixraacyo micnaheedu uusan ahayn koobiyeyn.
Raadinta tixraacyada ayaa aad muhiim u ah inay kugu hagto, Waxay kaloo iga caawisaa inaan arko, ogaado qodobbada kale ee aragtida, soo jeedinta, iwm. Shakhsiyan, waxaan u arkaa inay tahay geedi socod barasho oo aniga uun iigu adeegi doonin mashruucan, laakiin sidoo kale waxaan ku dabaqi karaa tixraacyadan mashaariicda dambe.
Taasi waa sababta aan ugu maleeyay inay xiiso laheyd inaan kuu sheego waxa aan leeyahay 4 Xisaabaadka 'Instagram' ee tixraaca. Kaliya maahan naqshadeynta, waxaa kale oo jira farshaxan, sawir qaadis, safar, iwm.
Qurxinta: Kani waa istuudiyaha qaabeynta madaxbanaan oo ku yaal Portland, Oregon. Naftooda naftooda u qeexaan inay yihiin maskax horumar leh. Waan jeclahay maxaa yeelay koontadiisa Instagram waxaan ku aragnaa sawirro taxaddar leh, oo leh badeecooyin kala duwan, halkaas oo aan kaliya lagu arkin midka sawir alaab wanaagsanWaxay sidoo kale na tusayaan howshooda, wax aniga muhiim ii ah, waxaan ugu yeeray bini aadminimo.
jenni.juurinen: Aniga oo leh kaliya 68 fariimo iyo ku dhowaad 500 oo raacsan, farshaxanyahankan reer Helsinki ayaa soo jiitay dareenkeyga. Waxaan u maleynayaa inay na siiso a sawir qosol badan, halkaas oo aan sidoo kale ka helno noocyo iyo midabbo nolol siiya.
Oh fasiraad: Waa a koontada ugu yar, oo leh codad dhexdhexaad ah iyo meelaha banaan. Dhammaan sawirrada ay qaaday qoraaga, Victoria, waxay leeyihiin natiijo aad u nadiif ah oo tayo leh. Shakhsi ahaan waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad.
Wargayska Minsparkle: waa joornaal blog / design ah oo aan ka heli karno waxyaabo cajiib ah. Waxaan u arkaa inay tahay heer kale. Runtii waan jeclahay kuwooda midabo, aad u xoog badan oo kacsan, oo leh isbarbardhigyo aad u calaamadeysan.
Halkan waxaan kaaga tagay liis yar ama aad u yar oo ah 4 xisaabood oo tixraacyo ah oo aad ii anfacaya, laakiin iyagu keligood ma ahan kuwa igu dhiirrigeliya. Adiguna, ma raacdaa mid ka mid ah koontooyinkan? Maxay yihiin xisaabaadkaaga gudbinta?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » 4 tixraac xisaabaadka Instagram
Facebook wuxuu tixgelinayaa inuu qariyo waxyaabaha uu jecelyahay qoraallada
Sawir gacmeedyo adigoo garaacaya qaybo gaar ah oo galaas ah